कोरोनाको कहर, उपचार बिना छटपटिएर दम तोडे दलित किशोर (दर्दनाक भिडियो सहित)
जनकपुरधाम, असार १० :
स्थान : प्रादेशिक अस्पताल, जनकपुर ।
समय : आइतबार राति ।
धनुषाको हंसपुर नगरपालिका प्रसाहीका १६ वर्षीय राजु सदा अस्पतालको आइसोलेसन वार्डको भुइँमा छठपटाइरहेका थिए । उनी कतिबेला खुट्टा उचाल्थे त कति बेला हात चलाउँथे । कहिले कपाल बेस्सरी लुछ्थे । तर स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सक कोही पनि हेर्न आएनन् । राजुको पीडा देख्न नसकेरै सँगै आइसोलेसनमा रहेका अरुण सदाले नजिकै गएर सोध्थे, ‘ए राजु, राजु ! के भो हँ ?’
तर राजु केही बोल्न सकेनन् । अरुणले भुइँबाट उठाएर बेडमा राखे । शरीर थप्थपाए । तर राजुको पीडा २० को १९ भएन । पीडाले हातखुट्टा चलाए, सिरानी च्यापे । आइसोलेसन सेन्टरमा घण्टौंसम्म छटपटाउँदा पनि राजुले उपचार पाएनन् । अन्ततः सोमबार साँझ आइसोलेसन अस्पतालभित्रै राजु सदाको प्राणपखेरु सदाका लागि अस्तायो ।
यसरी छटपटिएका थिए किशोर
Bp Sah यांनी वर पोस्ट केले मंगळवार, २३ जून, २०२०
राजु सदा झण्डै एक वर्षअघि रोजगारीको खोजीमा भारतको अहमदावाद पुगेका थिए । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण रोक्न भारतमा लकडाउन भएपछि उनी समस्यामा परे । भारतबाट अरू नेपालीजस्तै उनी पनि घर फर्किए ।
एक साता हिँडेर उनी ३ जेठमा प्रसाही आइपुगे । कोरोना संक्रमण फैलिएको क्षेत्र भारतबाट आएका कारण उनलाई स्थानीय जनप्रतिनिधिले क्वारेन्टिनमा राखे । तर लामो समयसम्म कोरोना परीक्षणका लागि स्वाबसमेत संकलन गरिएन ।
क्वारेन्टिन बसाइ भद्रगोल थियो ।
खाना, सरसफाइ राम्रो नभएका कारण क्वारेटिन बसेको १७ औं दिनमा उनलाई पखाला चल्न सुरु भयो । तर उनले राम्रो उपचार पाएनन् । क्वारेन्टिनमा बसेका अरू पनि बिरामी पर्न थाले । २८ जेठमा उनीसहित तीनजनालाई टिपरमा राखेर जनकपुरधामस्थित प्रादेशिक अस्पतालको गेटसम्म छाडियो । ‘अस्पतालले आइसोलेसनमा भर्ना त ग¥यो, तर उपचारमा ध्यान दिइएन’ घटनालाई नजिकबाट नियालेका पचु सदा भन्छन् ।
आइसोलेसन अस्पतालमा राखिएका उनलाई खाना त दिइन्थ्यो, तर कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट नआएका कारण चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी हेर्नसमेत नआएको परिवार र साथीभाइको गुनासो छ । राजु यसबीचमा निरन्तर झाडापखाला भएका कारण सिकिस्त हुँदै गए । उनलाई एक पुरिया जीवनजल समेत नदिइएको पचु बताउँछन् ।
सोमबार कोरोना संक्रमण नभएको रिपोर्ट आएपछि उनलाई दिउँसोतिर आकस्मिक कक्षसम्म लगियो । तर धेरै ढिला भइसकेको थियो । साँझ उनको मृत्यु भयो । ‘मेरो छोराको यसरी ज्यान जाने थिएन’ राजुका पिता असे सदा भन्छन्, ‘कोरोना जाँचका नाममा मेरो छोरालाई दिनुसम्म दुःख दिएर मारिएको छ ।’
राजुका काका राजेश्वर भन्छन्, ‘कम्तीमा पखाला लागेको जानकारी समेत हामीलाई दिइएन । थाहा भएको भए हामी आफैँ पनि उपचार गराउँथ्यौं ।’
चिकित्सकको दाबी : हामीले हेरेका थियौं
अस्पतालको लापरवाहीका कारण राजुको मृत्यु भएको परिवारको दाबीलाई प्रादेशिक अस्पतालका चिकित्सक भने मान्न तयार छैनन् । आइसोलेसन कक्षका प्रमुख डा. जामुन सिंह अस्पतालका डाक्टरहरूलाई बोलाएर देखाएको दाबी गरे ।
सिंहका अनुसार उनलाई इन्सेफ्लाइटिसको आशंका गरिएको छ । ‘रगत जाँच गर्दा सोडियम ११७ आएको थियो । सोडियम यस्तो अवस्था आउनु भनेको क्रिटिकल अवस्था हो’ डा. सिंह भन्छन्, ‘हामीले त्यतिबेला ३र४ जना डाक्टरलाई बोलाएर छलफल ग¥यौं । शनिबार रातिदेखि उपचार पनि शुरु गरेका थियौं ।’
इन्सेफ्लाइटिस भएको अवस्थामा बिरामी यसरी छट्पटाउने गरेको उनले सुनाए । ‘त्यस्तो अवस्थामा या त बाँधेर राख्नुपर्छ या त बेहोसीको औषधि दिनुपर्छ’ उनी भन्छन्, ‘तर उनलाई बेहोसीको औषधि दिने अवस्था थिएन । किनकि उनको रिपोर्ट आइसकेको थिएन । हाम्रो अस्पतालमा भेन्टिलेटर पनि भएन ।’
बेहोस बनाउने औषधि नदिएको र नबाँधिएका कारण उनी बेडबाट खसेको डा. सिंहको अनुमान छ। उनी भन्छन्, ‘सुरुमा त हामीलाई दिमागी रोगीको शंका भयो । साइक्लोजिस्ट डा. रवीन्द्र झालाई पनि बोलाएर देखायौं । तर त्यस्तो देखिएन ।’
त्यसपछि फिजिसियन रामेश्वर महासेठ, सञ्जीव झा, अजय यादवलगायतलाई देखाएको उनले बताए । तर कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट आउन ढिला भएका कारण आकस्मिक कक्षमा नलगिएको उनले बताए । सिंहले भने, ‘रिपोर्ट नआउँदासम्म कोरोना नै हो कि भन्ने थियो, तर रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि आकस्मिक कक्षमा लग्यौं ।’
राजुको अवस्थाबारे परिवारलाई जानकारी गराएको र हिस्ट्रीबारे परिवारले जानकारी दिन नसकेको उनले बताए । ‘हामी यो केसको डेथ अडिट गरिहेका छौं’ उनले भने, ‘उनी जुन मितिमा नेपाल आए, त्यसबेलादेखि क्वारेन्टिन, आइसोलेसन, आकस्मिक कक्षमा केही त्रुटि भएको छ कि भनेर अडिट गरिरहेका छौं ।’
सभार : अनलाईन खवर